Mudara raTinashe Muchuri: October 2012
kana uchikunga tizive ndozvawakada
kana uchikanda yemarambasadza tizivewo ndizvo zvauri
kwete kuzoti wakangodaidzwawo kunge hauna chawakaita
kwete yevanopemha asi yevanosisina dikita rezvavodya
zvose zvikatevera wani nhai chinoganda chiri pangoro
nhasi toona riya raisava basa hubasa hwaro
nhasi zvopembedzwa zviya zvataisaona sezvine basa
vaisirovana maoko vachiseka voti wava namakona
pane rimwe rakatobuda rokuti wakaishandisa mai kuti uve neiyi nhaka
iwe nekuziva rako dikita ukati paiwo pasingataurwi mavi
mauuya anotevera simbe kubva kusimbe mumatare esimbe
mavi achitevera magamba kubva kusimbe mumatare esimbe
ndizvoka, zvinotevera kushanda
mhururu inoridzwa nevaguta zvemaoko ako
asi varipo vanobaya dura nepfumo vaguta
kukanganwa nhamo yenzara yakavapa kupemha
kana naiye wakavanyaradza rumbo rwekupemha
Nyaya yavaviri ava yakandisvitsa kure chose. Ndakaenda kure ini. Kurekure uko ndakatanga kufunga kunyange nekudzidza kunoitwa Bhaibheri nevana vechikoro. Hazvinei kuti vana vanodzidza rugwaro rwefomu yechina kana yechitanhatu. Vose ava vane mabhuku avanosarudzirwa kudzidza nezvawo. Izvi zvinoreva kuti vadzidzi ava havabvumirwi kupinda mune mamwe mabhuku emubhaibheri kana vachida kukunda zvidzidzo zvazvo. Zvino iniwo hangu ndiri chii mumana iri? Hanzu dzandinopfeka dzakatanga kugadzirwa neveukouko, ndadaro ndonzi ndakademwa nadzo. Ndikati ndipfeke dzakagadzirwa kuno ndotosekwa. Ndinonzi handizivi fashoni. Vamwe ndivo vanenge vachinditi wakasara. Ndobva ndati kureva here kuti ndaita semabhuku aya emuBhaibheri asingaverengwi navadzidzi veBhaibheri asi kana vapedza zvidzidzo zvavo vagonzi vane ruzivo rweBhaibheri ivo vaingoita mabhuku matatu kana mashanu chete emuBhaibheri? Paya pavanonzi vazivi veBhaibheri, ivo vasina kubvira vambobatawo ini uye vasina kubvira vambonzwawo kuti ndinozipa sei uye ndakanyorwa zvakadii,zvinorevei? Kuti mana redu iri iBhaibheri here, iro rinonzi kana woda kuenda kune aya mabhuku asiri pahurongwa hwezvidzidzo zvomudzidzi asi kuti ugone kuzviverenga unofanira kutanga wapiwa mvumo kubva kumudzidzisi wako unozoti tipewo zvimwe zvawakadzidza pamusoro peBhaibheri?
Ndiri chii mumana iri? Ndiri chii kana ndichinzi ndinofanira kubhadhara kutenga rusununguko rwekufamba mumana rangu? Chii chinonzi mana iri? Kureva kuti ava vanoti pasi rose rava mana ndeavo vane muchini unogona kumbondera pandiri kunyange ndiri kunyika ipi kana ndatenga tunharembozha twavo vachitsvaka padandemutande? Ndivo here varidzi vemana rinorehwa iri? Chiiwo changu mumana iri? Inga ndinozivikanwa semunhu asingagoni kutaura nerurumi urwo ndinonzi ndinofanira kunge ndichirugona zvikuru? Ko zvino ndinomanikidzirwei kutaura mumwewo mutauro ivo vakandikoka kumusha kwavo vachinyatsoziva kuti ini handitauri rurimi rwavo? Asi ivo kana vachiuya mumana mangu havambotangi vadzidzira mutauro wangu kuti vagogona kutaura neni? Zvinoreva here kuti ini handisi chinhu mumana iri? Ndini here rara rakafanira kuiswa mudurunhuru rozongova nebasa chete kana raorera rofanira kuchipa zvirimwa upenyu nehutano? Ndiri chii mumuunganidzwa uyu unonzi pasi rose imana?
Zvinonetsa kunzwisisa kuti sei isu tiri mumana rimwe kana umwe afunga kundirova ndichinzi usadzosera? Kana iri nyaya yekuti umwe ari kundirwisa sei ndichirambidzwawo kudzorera? Handina kuti ndinofarira kurwa ini? Handidi kurwa ini. Ndinoziva kuti kurwa kunoteura ropa uye kunoparadza hupenyu nehupfumi, asiko kana umwe mugari wemumana akandirova sei ndichinzi peta maoko? Zvinoreva here kuti kune vamwe vagari vemana rino vanonzi ndivo vanofanira kurova vamwe vamwe vachingoterera zvavo marwadzo? Haisiyo inonzi mikonomashanga here inoita basa rokunetsa imwe? Ko zvino kana mumana redu muchifanira kugara nerunyararo seiko vamwe vagari vemumana rino vachibvumidzwa kugadzira michetura inotyisidzira vamwe vagari? Kureva kuti mumana medu maita mhondi navaroyika? Zvino varoyi nemhondi zvavawanda mumana redu toita sei? Ndiri chiiwo zvangu kungowawata ikoku? Izvozvi ndichatonzi ndinotaurisa? Kutaurisa ndichiona zvangu kuti handina simba rezvombo zvine muchetura uye mvumo yekupa vagari kufamba kwakasununguka. Asi ndizvo zvandipawo mubvunzo uno wekuti ndiri chii nhai mumuunganidzwa uyu?
Kana vamwe vachiziva kushanda kwemotokari itsva ini ndichizongoona zvangu dzasakara, zvinoreva here kuti ivo neni tiri mumana rimwe? Ko kana ivo vachinzi vane mari, ini handigoni kuenda kundoonawo nzvimbo dzinoyevedza mumana rangu nokuti handinawo mari, zvinorei kwandiri? Ndiri chii? Ndiri bhuku riya risingabvumidzwi pabvunzo here?
zvomotosimbirira kuti amakareva aya haazi enyu?
ko kana aipirwa mubairo maiaramba here?
ko kana aiva mauya maiaramba here?
zvomoita mana rose manzinzinzi
vanhu vasinganzwi mashoko achirehwa!
Chidimbu chemutambo Diamond in His Son's Grave yakaparurwa paTheatre in The Park musi weChipiri
Munyori wemitambo Steve Chifunyise aita zvake zviya zvaanozivikanwa nazvo zvokunyora mitambo inotokonya pfugwa. Iye zvino adzoka nemutambo unovaraidza uye uchitokonya pfungwa uyo wakaparura nemusi wechipiri manheru padariro repaTheatre In The Park.
Mutambo mutsva uyu unonzi iwo Diamond in his Son’s Grave unotevera imwe ichangobva kuitwa mudariro rimwero umwe wainzi Desperately in Love neumwe wainzi Roki and Maneta Encounter. Chinonakidza pamitambo miviri iyi ndechekuti munyori arikuramba achishandisa ruzivo rwake rwaanarwo maererano netsika namagariro avanhu. MunaDesperately in Love, Chifunyise aibata nyaya dzine chekuita netsika dzekuroorana pachivanhu apo mazuvaano vanakomana navanasikana vanongotanga kushanirana vari vega uye kugarisana pasina kubviswa roora, izvo zvinova zvisingabvumirwi pachivanhu. Umuwo muna Roki and Maneta Encounter, Chifunyise aiburitsawo samba rina madzimai uyewo kuti kana pachiitwa mitambo yemakwikwi vechidiki vashandise zvinhu zvinowanikwa mutsika namagariro edu kukwikwidzana sezvakaonekwa apo Roki naManeta mumutambo uyu vachinzi varidze mbira, hosho pamwe nekudzana pachinyakare.
Zvino uyu mutsva ndiwo wazouya nenyaya inopisa serufuse. Mutambo uyu Diamond in his Son’s Grave unotanga apo mukuwasha waChituro Zinyemba anotambwa naCharles Matare, Farai Mutero anouya achizivisa vatezvara vake kuti akawana ngoda apo vainge vachichera guva romwanakomana waChituro Zinyemba. Sevakuwasha apo Farai anotambwa naTinashe Chirisa aichera guva ravatezvara vake aine vamwe vekukama hwake akawana ngoda iyi. Vari mukati mekukakavadzana semhuri, ndipowo panouya tsamba yokuzivisa Chituro Zinyemba kuti aifanira kutama paagere nokuti painge paita ngoda uye mvumo yokuchera ngoda iyi yainge yapiwa kumuzukuru waFarai Mutero, Zibundo Muponda uyo aivepowo pakucherwa kweguva ratezvara vasekuru vake. Chisina kutaurwa ndechekuti mushure mekuenda nengoda iyi kumusha kwake pamwe nekundoona kuti yainge iri ngoda yemazvirokwazvo chii chakamupa kuti adzoke nayo. Chinogona kudaro chakamupa kudzoka nengoda kwaiva kuremekedza mufi setsika yechivanhu chedu. Zvakare aida kuremekedza vana tezvara vake kuti wanano yake nemudzimai wake isazokanganisika. Mukati mekukurukura kwaiitwa munyaya iyi pakaonekwa kuti Chituro Zinyemba aive asisina simba uye aive murwere zvekare uyuwo mwana wake Solomon aive chidhakwa. Izvi zvinogona kutokonya pfungwa dzedu senyika kuti izvi zvingava zvatinoita here zvokuti tinopedzera nguva mukupokana nezvekuti vamwe varwere kana vari varwere havasisina kukodzera kutitungamirira tichisiya nyaya dzakakosha dzokuchera ngoda tichiita kuti nyika yedu ibudirire. Pamusoro pazvo isu tichiita basa rokutukana nekupokana ndipo panouyawo umwe munhu kuti azotibvutira pfuma yatakachengeta kwemazazanana amakore. Ipapo anenge achiuya nekatsamba kanobva kubazi rezveemigodhi. Nyaya iyi inoita kuti Zinyemba adzore pfungwa dzake kumkare kuya apo nyika yainge ichatongwa navachena apo vanhu vaitinhwa vachiendeswa kundogara kunzvimbo dzakaoma dzisinganayi mvura zvakanaka. Anotaura zvekutya kwake kuti kana ngoda iyi ikacherwa hurumende inouya yomubvisa iye nevamwe vake ichivaendesa kwakasiyanasiyana sekuGokwe nekuBuhera uko kunongozivikanwa kuti hakuna chipenyu chinonyatsokuraramako kunze kwekungotambura nenzara apa vachisiyiswa makuva amadzitateguru avo izvo zvinozoita kuti vashaye kwekundochema zvichemo zvavo. Izvi zvinounza mubvunzo wekuti ko ivo vanhu vakachengeta ngoda kwemazazanana emakore aya vanowaneiwo kana ngoda yavakachengeta yava kunzi yapiwa kukambani dzinochera ngoda? Siewo ivo vakachengeta ngoda iyi vasingaitambisi vachingobviswa pasina chavanowana chinobatika kunze kwedzimba neminda zvinenge zvichitsiva zvavo zvavakapazirwa pachiiswa migodhi yengoda?
Mutambo uyu unotaurawo nezveavo vose vakafira nyika yeZimbabwe. Vanhu ava vanonzi vakafira kusunungura Zimbabwe asi zvino ngoda zvainongotutwa neavo vane makambani ko avo vakasunungurwa nevakafa ava vari kuwanei kubva mungoda iyi? Izvi zvinobva zvapinzawo chirongwa chezvemigodhi chiri kuitwa nehurumende chekuti venharaunda inocherwa zvicherwa vanofanirawo kuwana cheuviri kubva muzvicherwa zvinocherwa mairi. Dzimwe nyaya dzinobatwa nemutambo uyu dzakakosha zvikuru ndedzemidzimu izvo zvinoonekwa apo mutambo unopera vanhu vava kumakuva Chituro Zinyemba achitaura nemidzimu inosanganisira waMbuya Nehanda. Zinyemba anochema kuti vana vopedzana nekukakavadzana sakiso iriyo yengoda nyika ichiparara ivo vadzimu varipo. Anokumbirawo vadzimu kuti vapindire mudambudziko iri kuti kurwisana nenyaya yengoda kupere mumusha muve nerunyararo.
Mutambo uyu unotambwa zveunyanzvi nvatambi vanoziva basa ravo vanoti Charles Matare, Priscila Mutendera, Tinashe Chirisa, Getrude Munhamo, naTeddy Mangava uye uchitungamirirwa naEunice Chiratidzo Tava ndokupakurwa neRooftop Promotions. Basa rakabatwa, chaizvo uyewo Teddy Mangava uyo aitamba mumutambo uyu saSolomon anotamba zvinoyevedza chose. Mutambo uyu uchiri kuenderera mberi uchiitwa kuTheatre in the Park kusvika musi wa20 Gumiguru. Ndinokurudzira vasati vauona kuti vaende vandouona. Musaita zvekuudzwa itai zvemeso.
Kwaiva neumwe murume nemukadzi kune imwe nyika iri kure avo vaidanana chose. Vaviri ava vaidanana zvokudonhedzesa chin’ai zvaisvota avo vaisadanana mudzimba dzavo. Chemende pavaviri ava chakazova chekunetseka nembereko. Vaviri ava vaigara ku,mapani enyika iyi uko kwairimwa varimi vachikohwa pakuru. Nekuda kwedambudziko rembereko iri, vaviri ava vakaenda kundotsvaka muuchuki. Muuchuki akavauchuka mudzimai ndokubata pamuviri. Vakazvara mwana musikana. Mudzimai akafara chose kuti awana mubatsiri pamabasa apamba. Akapururudza kuti zvino awana mwanasikana achamuunzira mwanakomana. Mwanasikana wavaviri ava aive nerunako runotonhodza mvura inovira pamoto. Muzinda wese waitaura nezvemwana werunako uyu. Asi baba vake vaisamufarira. Baba vaida mwanakomana. Vaidawo anogona kusara netsvimbo dzavo. Nokudaro Havana kugona kuvanza ruvengo rwavo kumwasikana wavo. Vakabva vati mudzimai wavo ape mwana zita. Vakamutumidza kuti Naki. Naki mwanasikana werunako. Mai vake vaidada naye chose.
Mumwe musi vari kumunda kwavo vachisakura. Baba vaNaki vakatuma mai vanaki kundochera mvura. Mai Naki vakaenda kutsime vachisiya Naki arere zvake pamumvuri wemunyii waiva mumunda mavo. Vakasiya vati kuna baba Naki vatarire mwana ivo vachienda havo kumvura, baba ndokubvua. Asi vakazoshamisika kuwana mwana wavo achichema pasina anomunyaradza. Naki aichema kurumwa namagadzishava. Magadzishava aive akamomotera muviri waNaki wose. Baba vake Havana kuita hanya nokuchema kwake. Vaive vakatogara zvavo nechekoko vachiputa bute ravo.
Mai Naki vakadonhedza dende ravaive vashandisa kundochera mvura. Mvura yakarasikira pasi. Baba vaNaki ndokupengera mai Naki. “uri mukadzi rudzii anokoshesa mwana achisiya murume akamubvisira pfuma?” Mai Naki vasati vadaira mbama yainge yatovamhara. Vakahetura mwana wavo ndokutiza vachienda. Naki aigaronzwa nyaya iyi ichitaurwa. Kunyage zvazvo baba namai Naki vakazoita vamwe vana vakomana vaviri mushure maNaki, baba vaNaki havana kuzombafarira mwanasikana wavo.
Zvakazoti vana vababa namai Naki vakura, Naki ndokuroorwa kure nenyika yavabereki vake. Umwe mwanakomana wababa namai Naki mukuru akangotsakatika nenyika ndokusara uyo aiva rugotwe. Rugotwe rwavo rwainzi, Chikomo.
Nekufamba kwenguva baba Naki vakarwara. Vakarwara nechirwere chekusagona kumuka kubva pabonde. Baba Naki varwara vanhu vakaenda kumashopeshope. Ikoko vakandoudzwa kuti pakati pevana vababa vaNaki paifanira kuwana umwe akashinga aifanira kuuraya shumba. Auraya shumba aifanira kuzotsvaira nemusoro wayo pachivanze. Kana atsvaira chivanze nemusoro weshumba baba Naki vaizopora. Hama dzababa Naki dzakakumbira Chikomo. Chikomo ainge achangobva mukuwana mudzimai. Akaudza hama dzake kuti, ‘Handingaendi kundovhima shumba ndichsiya mwenga wangu ari ega. Ndife zvangu ndasati ndamboita mwana, handidi.’
Hama dzake dzakapererwa. Dzapererwa dzakangogara dzamirira kuti baba Naki vafe zvavo. Paurwere hwese uhu hapana akambofungawo nezvaNaki. Naki akatozonzwawo kuti baba vake vari kurwara namakuhwa. Vabereki nehama dzake vakazongoshamisika achisvika pamusha. Vakamupira nyaya yavo. “Ndomamirire akaita nyaya. Zvino hanzvadzi yako Chikomo anoti haagoni kusiya mwenga wake ari oga.” Naki akavaudza kuti, “Ndipei uta nemiseve ndiende kundovhima shumba yacho.” Akadaro achibuda mumba maiva nababa vake. Mai vake vakamutevera panze vachiedza kumudzivisa. “Naki, wava mudzimai wavaridzi. Kana ukadzyiwa neshumba, hona ini ndaguma ura mukuwasha akati ndoda mukadzi wangu ndinowanepi umwe mwana?” “Ndiri kudzoka neshumba pano.” Naki akatsunga moyo wake. Mai ndokumuti, “ziva kuti iwe uri musikana. Hauna kujaira kuvhima. Unonodyiwa neshumba. Ndinozotiiko kumukuwasha wangu. Mombe dzake dzaakabvisa dzeroora akazoti anodzida ndinodziwana kupi?” Mai vake vakachemachema, asi iye akaramba achikumbira kupiwa uta nemiseve. Akazopiwa uta nemiseve ndokuenda. Mazuva iwayo shumba dzaroora vana vavanhu. Pakapinda Naki musango akabva angoita mahwekwe ne shumba. Shumba yakafara kuona mwanasikana akanaka saNaki. Yakaridza kamuridzo. Ndokubva yatanga kutsvetsve Naki. Naki akaudza shumba kuti haana kuuya kuzogara musango asi kuti ainge auya kuzouraya Shumba. Shumba yakaseka. “Hehehehehe-e, zvino wava kuzoita kanyamakanyama musango muno.” Naki ndokuti,”Iiwe ndiwe wava kuzopera.” Akabva aisa museve pauta. Museve waiva wakananga kune shumba. Shumba yainge yakabva yaomba. Yakasvetuka yakananga kuna Naki yakashama muromo. Naki akanangisa museve wake nemumuromo meshumba. Museve wakadambura uropi hweshumba ndokuti pasi gwadara.” Naki akadambura musoro weshumba ndokumuisa munhava yake ndokumhanya oenda kumusha kuna baba vake. Asati asvika kumusha, baba vake vakabva vatanga kunayazvishoma nezvishoma vachisumuka kubva panhovo. Akazosara opedza kutsvaira pachivanze baba vake vatonaya. Paakapinda mumba maiva nababa vake hama neshamwari dzaive dzakarinda murwere dzakafara. Madzimai akapururudza, hanzvadzi yake Chikomo ndokusvova nenyadzi. Madzimai akapururudza avawo baba vaNaki ndokumbundira mwanasikana wavo ndokuchema vakadaro.
Yakatanga kubuda muChiringiro bepanhau idzva rechiShona rinobuda pavhiki pavhiki nomusi weChishanu wegawega.
Mumakore mazhinji adarika vananyanduri vaitsutsumwa nekuti NAMA haisi kuvaremekedza apo yaivasiya pahurongwa hwayo hwekupa vadavadi vanenge vadavadika zvine hunyanzvi mundima dzavo dzohudavadi dzakasiyanasiyana. Izvi zvaisakiswa nokuti NAMA yaivewo isina menduru yaipiwa vananyanduri pahurongwa hwayo hwekuremekedza vadavadi uhu. Kutanga gore rino apo NAMA ichange ichiremekedza vadavadi vakabata basa zvine hunyadzi mugore rino rose, muna Kukadzi wegore rinouya, vananyanduri vachange varipowo vachinyemwerera kuvapo kwemenduru yekutanga kupiwa nyanduri izvo zvainge zvisati zvamboitika kubvira zvakatanga hurongwa hweNAMA uhu.
Hurongwa hwekuremekedza vadavadi vane udavadi hwakasiyanasiyana munyika yeZimbabwe hweNational Arts Merit Awards hwakaoneka huchikumikidza zvikamu zvitsva zvokuremekedza vadavadi. Pazvikamu zvitsva izvi zvinosanganira izvo zveavo vanoita hudavadi hwehunyanduri pamwe nekusetsa vanhu. Vadavadi vemuchikamu ichi vavakuzopiwawo menduru dzokugona basa kwavo mundima dzavo zvichaitika muchiitiko chekupa menduru ichi icho chichaitwa muna Kukadzi wa2013 mudhorobha reBulawayo. Izvi Zvauya mushure mekunge avo vanoita zvehudavadi vainge vachinyunyuta nekusaremekedzwa muchiitiko chakakosha kudai uye chinosumudzira zvikuru.
Vananyanduri vandakataura navo vakaratidza kufara zvikuru nekuda kwemenduru yeNAMA iyi. Robson Shoes uyo anozivikanwa nezita rekuti Shoes Lambada akati iye, "Ndinofara zvikuru uye ndinotambira chiitiko ichi nomufaro. Asi ndichishuvira kuti panguva inotevera hurongwa hweNAMA uhu huwedzere menduru dzokuremekedza vananyanduri nokuti kuna vananyanduri vanengewo vava nemaVideo, koitawo vanenge vatsikisa hutaurwa hwavo, kotiwo ivo vanasarungano." Umwewo akafara kuti zvinhu zvaita kuti kwava nemenduru yavananyanduri ndiMichael Mabwe uyo anozivikanwa nezita rebasa rekuti 'Mwanakomana' akati iye, "NAMA yaita chinhu chakanaka chaizvo nokuti tanga takazvimirira kwenguva refu chose. Chatisingazivi zvedu ndechekuti vachashandisa nzira ipi kusarudza anenge akunda vamwe vose.' Umwewo nyanduri wekuMasvingo andakasangana naye panguva yemutambo weDzimbahwe Arts Festival anonzi Pamhiri Chenjerai akati iye, 'Ichi chiitiko chakanaka asi chete kungoti izvozvi menduru inogona kunge yakagadzirirwa umwe nyanduri. Hatizivi chete kuti nyanduri wacho ndiyani!'
Elizabeth Muchemwa anoti iye, 'Ndinogashira nyaya yeNAMA iyi seruremekedzo rukuru kunananyanduri pachavo uye kumusambo hwehudavadi wehunyanduri. Zvinofadza kuti NAMA yakuona kuti hunyanduri chitoriwo chimwe chikamu chekudavadika chakazvimirira choga uye kuti chinofanira kuremekedzwa kuitira kukurudzira vananyanduri kuti vanyatsoita basa namazvo." Primrose Dzenga anotiwo iye, 'Aiwa, ahhh, tafara isu, asika dambudziko rava rekuti tichinyora zvinonwisa mvura, ahhh hapana chisina chachakaipira'.
Hecho chitsvambe kwamuri vananyanduri chekurova basa sebasa. Kwamuri imi vanaTatenda Chinoda, Abel Mauchi, Chenjerai Mazambani, Bhekhumusa Moyo, Siphosethu Mpofu, Mgcini Nyoni, Likwa Ncube, Philani Nyoni, Standandekhile Dube, Elizaberth Muchemwa, Teresa Muchemwa, Ticha Muzavazi, Soprofound, Madzitatiguru, Kiss, Batsirai Chigama, Moreblessing Size, Aura Kawanzaruwa. Xapa, Mbizo Chirasha, nevamwe vazhinji heyo menduru yamaichemera iya.
Zvino veNAMA vanoti, avo chete vakagona kunyora zvitsva kubva musi wa1 Zvita 2011 kusvika musi wa30 Mbudzi 2012 ndivo chete vanogona kupinda mukusarudzwa kuva mutakuri wemenduru yehudavadi hwehunyanduri iyi. Avo vose vainakidzwa nokuimba 'dzokorora ndanzwa kunaka', votomirira mwaka unotevera vave nezvitsva. Chete kungoti hazvo nguva haisati yapera, pachine mukana mukuru wekuti avo vasina zvitsva mumwaka uno vagadzire zvitsva zvavo zvemwaka uno kuti vagone kupinda mukuremekedzwa uku. Nyanduri pakadai ndinoziva kuti haadi kusaririra shure semuswe. Zvino kana wati haudi kuita hwemuswe, veNAMA vanoti unofanira kuti paya paunenge uchidavadika paya, wochitorwawo vhidiyo iyo inozoshandiswa nenyanzvi dzinosaruda nyanzvi yakarova nduri pamberi pavanhu kuti vaone umhizha hwako sanyanduri.
Chidavadikai zvine unyanzvi vanemeso vaone uyewo vane nzeve dzokunzwa vanzwe kuti vagokupaiwo ruremekdzo rwemenduru iyi. Tisingakanganwi avo vakavhura mwanza mune zvekudetemba izvi vanoti, Paul Damasane, Albert Nyathi, Chirikure Chirikure naIgnatius Mabasa.
- October 03, 2012 No comments: Links to this post